Nukliyeerka Sacuudiga oo baadhitaan lagu samaynayo | Berberanews.com
Home WARARKA Nukliyeerka Sacuudiga oo baadhitaan lagu samaynayo
Nukliyeerka Sacuudiga oo baadhitaan lagu samaynayo
WASHINGTON. D.C (Berberanews)- Dawladda Maraykanka ayaa ku degdegaysa in ay macluumaad xasaasi ah oo ku saabsan tiknoolajiyadda quwadda korantada ee nukliyeerka la wadaagto Sacuudi Carabiya, sida lagu sheegay warbixin cusub oo ay soo saareen aqalka Wakiillada.
Guddigan aqalka uu xisbiga Dimuqraadigu hoggaamiyo ayaa billaabay baadhitaan ku aadan walaaca laga qabo in Aqalka Cad uu boqortooyada Sacuudiga ka dhiso warshad quwadda korontada ka dhalisa nukliyeer.
Shirkado lala xidhiidhiyay madaxweynaha ayaa lagu soo warramayaa in ay dabada ka riixayaan wareejinta macluumaadkaas.
Warbixinta guddiga dusha kala socoshada ee Aqalka Wakiillada ayaa xustay in baadhitaankan “uu muhiim yahay maadaama oo ay u muuqato in ay socoto qorshaha ay dawladda Maraykanku ay macluumaad xasaasi oo tiknoolajiyadda nukliyeerka ku saabsan kula wadaagayso dawladda Sacuudi Carabiya.”
Trump ayaa Aqalka Cad kula kulmay qolyaha quwadda nukliyeerka sameeya 12 February, si uu ugala hadlo warshado loo dhisayo dalal Bariga Dhexe ku yaalla oo Sacuudigu ka mid yahay.
Wadahadal hore oo ku saabsanaa tiknoolajiyadda nukliyeerka Maraykanka ayaa dhammaaday ka dib markii uu Sacuudigu diiday in uu galo heshiis ku saabsan in teknoolajiyaddaan aan hub ahaan loo adeegsan doonin, balse waxaa laga yaabaa in maamulka Trump aanu daruuri u arkin heshiiska noocaas ah, sida uu ku warramay ProPublica.
Dadka arrintan dhaliila ayaa sheegaya in haddii Sacuudiga la siiyo tiknoolajiyadda nukliyeerka ee Maraykanka ay arrintaasi horseedi karto loolan halis ah oo dhanka hubka ah oo ka dhaca gobolkaas aan daganayn.
Previous articleWasiirka Horumarinta Beeraha Somaliland oo ka warbixiyay safar uu ku tegay Turkiga
Next articleAmnesty International oo Baaq ka soo saartay Xadhigga Abwaan Abees